जिल्ला समन्वय समिति पर्वतमा एमालेको पुरै प्यानल बिजयी ! – ebaglung.com
२०७४ श्रावण १७, मंगलवार १६:५६	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
जिल्ला समन्वय समिति बागलुङको उपसंयोजकमा एमालेका भुषाल निर्विरोध !
महेन्द्र केसी, पर्वत २०७४ साउन १७ । जिल्ला समन्वय समिति पर्वतको संयोजकमा एमालेका उम्मेदवार मनोहर बी पौडेल बिजयी भएका छन् । मंगलवार भएको निर्वाचनमा पौडेलले ८ मत प्राप्त गरी बिजयी भएका शुन भने उनका निकटतम प्रतिव्दन्दी नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार परशुराम पुरीले ६ मत प्राप्त गरी पराजीत भए।
त्यसैगरी उपसंयोजकमा नेकपा एमालेकै यामकुमारी रानाले ८ मत प्राप्त गरी विजयी भएकी छन् भने नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार लालकुमारी सिकेले ६ मत प्राप्त गरेकी थिईन।
समन्वय समितिका अन्य सात सदस्य पनि एमालेलेनै जीतेको छ । बिजयी सदस्यहरुमा ज्ञानबहादुर भण्डारी, बिष्णुराम बिक, कबिता बिक, नन्दलाल सुबेदी, ओमप्रसाद रेग्मी, बिष्णुमाया पौडेल, र शर्मिला नेपाली रहेका छन् ।
समन्वय समितिको निर्वाचनमा जिल्लाका सात स्थानिय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी १४ जना मतदाताले सहभागिता जनाएका थिए । पर्वतमा सात स्थानिय तह मध्ये स्थानिय तहको चुनावमा चार वटामा एमाले बिजयी भएको थियो भने तीन वटा तहमा नेपाली काँग्रेस बिजयी भएको थियो ।
बिजयी उम्मेदवारहरुको सपथ तथा पदभार ग्रहण समेत आजै सम्पन्न हुने भएको छ ।
निर्वाचित भएपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै समन्वय समितिका संयोजक पौडेलले समग्र पर्वत जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्रको विकासका लागि आफु निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनले जिल्लाका सवै स्थानिय तहका साथै प्रदेश र केन्द्रसम्म आफुले आवश्यक समन्वय गर्ने र जिल्लाको समग्र विकासमा सँधै क्रियाशिल रहने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए।
उता जिल्ला समन्वय समिति बागलुङको उप संयोजकमा नेकपा एमालेका विष्णु भुसाल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । नेपाली काँग्रेसका उमेदवार रामप्राद बि.कले उमेदवारीबाट नाम फिर्ता लिएपछी उनी निर्विरोध भएका हुन् ।
बागलुङमा नेपाली काँग्रैस विरुद्ध राप्रपा सहितको वाम तालमेलबाट संयोजकमा राजमोका राजेन्द्र ढुंगाना र एमालेका भुषाल उपसंयोजकमा उमेदवार बनेका थिए । संयोजक पदको भने २० गते निर्वाचन हुने छ ।
गणितीय हिसावले संयोजक पदमा राप्रपा वाम तालमेलबाट उमेदवार बनेका ढुंगानाको जीत निश्चित भएको देखिन्छ । जिल्लाका १० स्थानीय तहमा नेपाली काँग्रेसको ८ र राप्रपा, एमाले, राजमो र माओवादी केन्द्रको गरी १२ मत रहेको छ ।
नेपाली काँग्रेसबाट एक जना महिला उमेदवार बनाउनु पर्नेमा नबनाएपछी उनको नाममा विरोध परेको थियो ।